भोट चैं… सुर्जेमै है ☀️☀️☀️ – बाह्रथरी कुरा
May 1, 2017 By Adams राजनिती
पाठकहरु, भोट चैं सूर्यमै हाल्नु होला है….। किनभने देशमा अहिले दुईटा पार्टी मात्र छन्। एउटा एमाले अनि अर्को चैं बाँकी बचेखुचेका कुँडाकर्कटको जमात। बैशाखको चरो खस्ने गर्मीमा भोट हाल्न जाँदा सिङ्गो र जिउँदो पार्टीलाई नै हाल्न परो नि … हैन ? संविधानसभाको चुनावमा दोस्रो पार्टी बनेको भए पनि एमालेको ताकत हेर्नुस् त। एमालेले सहयोग नगर्दिएसम्म न संविधान संधोशन हुने भो, न सिमाना नै हेरफेर। केपी ओलीले थर्काएपछि नाकको चालले स्थानीय निकायको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिएको खबर त तात्तातै छ। हेर्नुस्, एमाले सहमत नहुन्जेल देशमा केही हुन्न। मित्रराष्ट्रको बैशाखी टेकेर उभिएका मधेशवादी दल र तिनको एजेन्डा खाटी भाषामा भन्ने हो भने – कौन पुछे खेसडी का दाल जस्तै नै हो !
अंगिकृतेबाट देश जोगाउन
काला कांग्रेसी, माओवादी, मदेशवादी साथीहरुको त यो माथिको प्याराग्राफ पढ्दा नै कन्पारो तातिरहेको होला है ? कि मुखबाट दुई-चार राष्ट्रिय भाषामा गाली (उहि क्या…. मा.. मु… वाला) निस्कि पनि सके ? निस्के नि बाल हो। गर्न सक्ने केही हैन…. सक्ने भए गरेर देखाउ…. !!! किन हेरफेर गर्न परो सिमाना ? अंगिकृतले देश चलाउने अनि हामी चाँहि लाटाले पापा हेरे जस्तै गरेर बस्ने ? भारतमै त दक्षिणतिर हिन्दीको “ह”सम्म सुन्न चाहन्नन् जनता अनि यता चैं सरकारी कार्यालयमा कामकाजको भाषा नै हिन्दी बनाउने ? हैन यस्ता तोरी कुरा गर्न लठ्ठकहरु घाँस खाँदा रचन् कि भाङ् ? अन्न खानेले त यस्तो कुरा नगर्न पर्ने !! हुनत संसोधनमा अन्य भाषालाई अनुसूचिमा राख्ने भनिएको छ क्यारे तर पनि एमाले नभएसि मूल भाषा नै हिन्दी बनाउन बेर गर्दैनन् याँ।
यो लेख सम्पादन गर्दैगर्दा समाचार आयो- कांग्रेस र माओवादी मिलेर प्रधानन्यायधीश शुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। अब हेर्न, पढ्न, सुन्न केही बाँकी रह्यो? अब त चुनावै नहुने भन्ने डर भयो। भोट हाल्ने कहाँ अब? आफूले भनेजस्तो नहुँदा न्यायलयमाथि नै आक्रमण गर्ने? हिजो लोकमानलाई महाभियोग लगाउने बेला चुँ बोल्न नसक्नेहरु आज प्रधानन्यायधीशविरुद्ध कति सजिलै उभिए? हुँदा हुँदा कांग्रेसी गृहमन्त्रीले समेत राजीनामा दिए। चुनाव गर्न नसक्ने भएर कि पार्टी हार्ने ग्यारेन्टी भएर? मा’भियोगको विपक्षमा उभिएर त भुत्रो नि हैन। अब पनि भोट सुर्यमा नहालेर के मा हाल्ने त मान्यवर?
दलालको झुण्डमा एक्लो बृहस्पति
एमाले भनेको एक्लो बृहस्पति हो। धन्य ओल्बा छन् र यहाँ मनपरि हुन पाएको छैन। नत्र यो देश उताको ३० औं राज्य हुने थियो। छुट्टै पनि के दिँदाहुन् ? युपी बिहारमै मर्ज गराइदिन्थे होलान् ! स्वाधिन स्वतन्त्र देशको संविधान बनाउन पर्नेछ, एजेण्डा… बिदेशीको बोकेर बस्याछन्। स्वनामधन्य बुद्दिजिवीहरु १२-२७ कुरा गरेर घुमाई फिराई “यसरी भारत खुसी होला त ? “ भनेर लाग्या छन्। भारत खुसी नभए के हुन्छ ? सबैभन्दा पहिले त “ईन्धन” त रोक्ने रहेछन् नि। रोकोस्। ६ महिना रोकेकै हो। आर्थिक बृद्धिको बाटोमा लम्किरहदाँ सधैभरी छिमेकीलाई थिचोमिचो गरेर विश्वमञ्चमा बस्न सक्ला र भारत ? यसैले घुमाई फिराई भारतिय एजेन्डा बोक्न दलहरुले अलिकति हिम्मत लिने हो भने भारतले गर्न सक्ने केही हैन।
नाकाबन्दी ताका धन्य ओल्बा थिए र झुक्न परेन। सानोतिनो गिभ एण्ड टेक त भै नै हाल्छ। तर देशको स्वधिनता त अक्षुण रह्यो नि। नाकाबन्दी समाधान भएपछि यिनै केपी ओली थिए अडान लिने, त्यसैले त फकाउन “आई देउ न प्रभु” भनेर भारत बोलाए। केपी ओली भारतमा रहदाँ मोदीसँगको फोटो हेर्नु भा होला नि। याद गर्नु भाछ नि। केपी ओली प्रशन्न मुद्रामा छन्, मोदीको फेस डाउन छ। किनभने ओली विजेता हुन्। यिनले स्वाधिनताको लडाईँमा भारतलाई हराएका हुन्। मोदीले गर्न सक्ने केही हैन। नेपालका केही दलालहरुलाई उचालेर राख्ने हो।
हिजो केपी ओलीले रेलको कुरा गर्दा कागजको रेल कुदाएर हाँसो गर्नेहरु अहिले स्थानीय चुनावको घोषणपत्रमा रेल कुदाई रहेका छन्। यो हो नि कुरा। आखिर ओलीले कुरा ठिकै गरेका रहेछन्। रेल त गुडाउनै पर्ने रहेछ। पासपोर्ट नदेखाई रेल चढ्न देश बच्नुपर्यो नि। अनि के को कोकोहोलो। अनि आजमात्र बजारमा आएको एमालेको घोषणापत्र पढ्नुभयो? पढ्नुभएको छैन भने यो लेख पढिसकेर घोषणापत्र पढ्न जानुस्। अब मुख्य योजनाकारलाई भोट हाल्ने कि योजनाकारका भाषण सुनेर त्यो भाषण सार्नेलाई भनेर हामीले भन्नुपर्छ होला त बुझ्झकी जनता पाठकलाई?
त्यसैले पाठकहरु ! भोट एमालेलाई हाल्न पर्छ। देश रह्यो भने न स्वाभिमान रहने हो। कांग्रेसीहरुको केही भर छैन। खाँट्टी कांग्रेसी दीपकुमार उपाध्यायलाई हेर्नुस् – देशको प्रधानमन्न्रीले हामीलाई नाकाबन्दी गरियो भन्दा राजदुत भएर केही भएको छैन भने। यी कांग्रेसीहरुलाई लाज शरम केही छैन। भुकम्प पीडितको दुई चार बण्डल जस्तापाता भए पुग्छ। त्यस्तै मदेशवादीलाई हेर्नुस्, ईन्धन रोक्ने अनि हामीले बाटो छैक्या हौं भन्ने ? माओवादीको के कुरा गर्नु ? यिनीहरुको पनि एजेन्डा छ ? कुर्सि चाहियो, जे पनि भन्दिन्छन्/भैदिन्छन्।
त्यसैले आदरणिय पाठकवर्ग, हिजो के कसो सबै बिर्सेर यसपाली एमालेलाई भोट दिम्। जे जस्तो भए पनि आफ्नो कुरामा अडान लिने अहिले समयमा एमाले र ओली नै हुन्। भोलि अरु पार्टीलाई पनि यही रबैया देखाए भनि गाई कि त्रिशुल गरेर भोट दिनु होला। हुनलाई जो जिते नि हामीले १२ थरी पढेरै बस्न पर्ने हो।
चुनावी चर्चा चलिराको बेलामा हामीपनि राजनीतिसँग अछुतो रहन सक्ने कुरा पक्कै होइन ! हाम्रो अभिप्राय चुनावमा पर्चा र ब्यानर भन्दा पनि बिचार र योजनाको आधारमा भोट खसोस् भन्ने हो। हिजोको कदमपछि तत्काल माओवादी र काँग्रेसले भोट माग्न जाँदा भाटे कार्वाही भेट्ने अवस्थामा हामीले यो लेख छापेका छौं । भोलि अरु कुनै दल वा पार्टीलाई पनि किन भोट दिने भन्ने ‘थिम’मा कसैले तार्किक तर रमाइलो रचना पठाए हामी अवश्य पोष्टिने नै छौं। आखिर, पाठक छन् र त १२ थरी छ ||
एमाले, के पी ओली, चुनाव, माओवादी, सुर्य
2 thoughts on “भोट चैं… सुर्जेमै है ☀️☀️☀️”
हा हा हसाय अनन्त ब्रोले।
टिप्पणीकार को रहेछ बार्हथरिको भन्ने लागेको थियो बल्ल आज थाहापाए।
Pingback: भोट चैं रुखमा, नत्र भेटलाऊ मुखमा 🌳 | बाह्रथरी कुरा